Home News Puntland oo beeniyay in Dowladda Soomaaliya lacag ugu deeqday dhismaha jidka Ceeldaahir
Puntland oo beeniyay in Dowladda Soomaaliya lacag ugu deeqday dhismaha jidka Ceeldaahir
War-Saxaafadeed kasoo baxay Maamulka Puntland ayaa waxaa lagu beeniyay in dowladda Federaalka Soomaaliya lacag ugu deeqday dhismaha Jidka Ceeldaahir-Ceerigaabo.
War-Saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yiri” Dawladda Puntland waxay la wadaagaysaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland in ay tahay libin sheegasho beena, sheegashada Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku sheeganayso inay ugu deeqday wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo lacag dhan $1500,000.00 (Hal Milyan Iyo Shan Boqol oo Kun oo Doolar).
Sidoo kale War-Saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in lacagtaas Midowga Yurub uu ugu deeqay,hayeeshee loo soo marsiiyay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
War-Saxaafadeedka Puntland oo dhameystiran.
Previous articleWasiir katirsan Xukuumada Kheeyre oo kulan la qaatay safiirka Jaamacada Carabta u fadhiya Soomaaliya
Next articleShir looga hadlayo arrimaha Dastuurka Dalka oo maanta Muqdisho ka furmay
Gudiga Difaaca Maamulka Puntaland Oo Ku Dhawaaqay Dagaalka Dhan Ah Maamulka...
Somalia sets dates for presidential and legislative elections